Ahoana ny fakana sary iray amin'ny tranokala misy refy manokana mampiasa Google Chrome | Martech Zone
Raha maso ivoho na orinasa manana portfolio-tranonkala na pejy tianao zaraina amin'ny Internet dia mety nandalo fanaintainana ianao tamin'ny fiezahana haka akanjo fanamiana. sary an'ny tranonkala tsirairay.
Ny iray amin'ireo mpanjifa izay iarahanay miasa dia manangana Vahaolana intranet izay azo ampiantranoina ao anatin'ny faritry ny orinasa iray. Intranets dia manampy be dia be amin'ny fampitan'ny orinasa ny vaovaon'ny orinasa, hizarana vaovao momba ny varotra, hanomezana vaovao mahasoa sns
Nanampy ny OnSemble hamindra ny vahaolana Intranet tao amin'ny tranonkalan'ny orinasan-dry zareo izahay. Tetikasa midadasika izy io izay nampiditra ny zava-drehetra tamin'ny fananganana mombamomba ny fiaraha-monina vaovao, ny fanavaozana an'i Marketo, ary avy eo ny famongorana ny sasany amin'ireo fivoarana manokana izay efa nataon'izy ireo taloha mba hanambatra ny tranonkalany.
Pikantsary amin'ny mpanjifa Miaraka amin'i Google Chrome
Mety tsy tsapanao izany, fa afaka maka pikantsary tonga lafatra ianao miaraka amin'ireo fitaovana fampiroboroboana mahery vaika an'ny Google Chrome. Ny mahavariana dia tsy endri-javatra malaza loatra izy io na eo aza ny fahafaha-mamolavola mahatalanjona.
Ity misy fampianarana video haingana momba ny fomba fakana pikantsary tonga lafatra sy voafaritra tsara amin'ny pejin-tranonkala amin'ny Google Chrome:
Dingana tokony hakana sary iray amin'ny Google Chrome
Ireo fitaovana ampiasain'ny Google Chrome dia manana safidy hijerena tranonkala iray amin'ny alàlan'ny fitaovan'ny fitaovany. Namboarina ilay fitaovana mba hahitan'ny mpamorona ny fomba fahitan'ny tranonkala ny haben'ny zotram-pijerena samy hafa amin'ny fitaovana samihafa… saingy fomba iray tonga lafatra ihany koa ahazoana pikantsary milanja tonga lafatra amin'ny pejin-tranonkala.
Amin'ity tranga ity, izahay dia maniry ny tsirairay amin'ireo mpanjifan'ny OnSemble manerana ireo indostria izay nanangana tranokala Intranet tsara tarehy haka sary iray mba hahafahanay mampiseho azy rehetra ao anaty portfolio amin'ny tranokalany. Tianay ireo pejy ireo ho 1200px ny sakany, 800px ny halavany. Mba hanatanterahana izany:
Ao amin'ny bokotra havanana farany havanana (teboka mitsangana 3), safidio ny Ampanjifaina sy hifehezana ny Menu.
Select Fitaovana bebe kokoa> Fitaovana fampivoarana
Hamaky ny tohiny ... Fitaovana Fitaovana hampakatra ny safidin'ny fitaovana sy ny refy.
Apetraho ny safidy voalohany manaiky, avy eo apetraho amin'ny 1200 x 800 ny refy ary tsindrio enter. Hiseho miaraka amin'ireo refy ireo ny pejy.
Eo amin'ny ilany ankavanan'ny Fitaovana Fitaovana, tsindrio ny bokotra fitetezana (teboka 3 mitsangana) ary safidio Pikantsary fakana sary.
Google Chrome dia handray pikantsary tonga lafatra ary hampidina azy ao aminao Downloads fampirimana ahafahanao mampifandray sy mandefa izany amin'ny mailaka. Aza hadino ny misafidy pikantsary habe feno satria handany ny halavan'ny pejy izany ary tsy hiraharaha ny fetran'ny halavanao.
Kitapo hitsin-dàlana Google Chrome ho an'ny pikantsary
Raha tompona hitsin-dàlana fitendry ianao, dia afaka maka pikantsary feno feno ihany amin'ireto hitsin-dàlana ireto. Tsy tiako ity fomba fiasa ity satria tsy azoko atao ny mametraka ny haavon'ny viewport indrindra… fa mora raisina raha toa ka mila pikantsary pejy iray manontolo ianao.
Kitendry hitsin-dàlana amin'ny Mac:
Kitendry hitsin-dàlana amin'ny Windows na Linux:
Tags: mpizaha sarymisambotra pejy web habehisambotra pejy webfitaovana mpamoronafitaovana fitaovanagoogle chromefitaovana fampivoarana chrome googlemanaikypikantsarypikantsary pejy web
Fifanarahana: Manampia traikefa amin'ny fizahana mivaingana mba hampitomboana ny tahan'ny fiovam-po sy hampitomboana ny varotra
MakeWebBetter: Amboary sy hamboly ny orinasanao ecommerce amin'ny WooCommerce sy Hubspot